८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग शिक्षिका भागेपछि…. – Namaste Host
March 1, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on ८ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीसँग शिक्षिका भागेपछि….
भारतको गुजरातमा रहेको गान्धीनगरमा २६ वर्षीया शिक्षिका आठ कक्षामा पढ्ने १४ वर्षीय विद्यार्थीका साथ भागेकी छन् । विद्यार्थीका पिता सरकारी कर्मचारी हुन् र उनले प्रहरीसमक्ष शिक्षिकाका विरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् । शिक्षिकाले छोरालाई फकाएर आफूसँग लगेको उनको आरोप छ ।
‘म बेलुका ७ बजे घर पुग्दा छोरो हराइरहेको पाएँ । छोरो ४ बजेतिर घरबाट निस्केको पत्नीले बताइन् । हामीले उसलाई टोलभरि खोज्यौं र नातेदारहरूकहाँ पनि सोधखोज गर्‍यौं तर
भारतीय दण्ड संहिताको दफा ३६३ अन्तर्गत कलोल प्रहरीसमक्ष उजुरी दर्ता गरिएको छ । उजुरीमा ती शिक्षिका कलोल शहरको दरबारी चालमा बस्ने उल्लेख छ ।
उनीहरू दुवैले मोबाइल फोन नबोकेकाले पत्ता लगाउन गाह्रो परेको कलोल शहर प्रहरीका निरीक्षक केके देसाईले बताएको भारतिय मिडियाले समाचार छापेका छन् ।
११ घण्टासम्म यो जोडीले गरेको चटक देखेर विमानका सबै यात्रु छक्क परे